Umdlalo Wenguqu Okhangelelwe Ngabanengi Enkundleni yeNational Sports Stadium
Kuyabe kungabizwa ozwayo enkundleni eye National Sports Stadium lapho okuyabe kunqikilana amaqembu amakhulu enguqu awe Harare, ele Caps United lele Dynamos emdlalweni obumelwe ngabanengi okwenyanga ezinhlanu ezedluleyo.
Lanxa iqembu le Caps United likhweze imbadalo yokungena egedini ukuyabukela lumdlalo, isuka kumadollar amathathu isiya kwamahlanu-$5 isuka ku$3, lokhu kubikwa kungasoze kwehlise inane lababukeli ngoba umuntu wonke uwubheke ngabomvu lumdlalo, ezimisele ukukhokha leyo mali.
Amaqembu womabili asele midlalo eyisithupha ilandelana enganqotshwanga iDembare isile miklomelo elitshumi lasithupha kuti I Makepekepe isiletshumi lane-14.
Ngakhoke zindala zombili phakathi kwala maqembu limpelaviki lanxanje i-Caps United ingena kulumdlalo ingela badlali bayo abalohlonzi abathi u-Ronald Pfumbidzai osewayaa dlalela kwele South Africa lo Abbas Amidu osewaya kwele Tunisia kuthi uDominic Chungwa esekujezisweni ngokumiswa ukudlala imidlalo ethile ngemva kokunikwa ama yellow cards amathathu.
I-Dynamos, yona hatshi kayila lolo hlupho ingenza kulumdlalo ilume owangaphansi njalo umqeqetshi uLloyd Mutasa ubikwa ethembe ukusebenzisa ukhaphutheni uOcean Mushure lomdlali wakhe odlala kakuhle u Denver Mukamba.
Udaba lomdlalo wenguqu phakathi kweDynamos leCaps United